Laascaanood Dagaal Dan uma aha!
Joojiya Durbaanka Colaadeed! Dadyoowga aduunka cidhifyaddiisa kala duwan ku sugan waxay isugu bogaadinayaan sanadka dhalandoona, iyaga oo isu rajeynaya wanaag , bash-bash iyo barwaaqo. I dina waxaad hadda tumeysaan durbaan colaadeed oo wuxuu ku danbeyn aan la ogeyn. Ma anaa waalan misse dadku ma fahmin waxa uu eebe ugu deeqay waxa ugu muhiimsan in uu yahay caqliga.
Waxaa mudan in aan taariikhda dib loo jaleeco. Ma fogeyn markaan fadhiyey gurigeygi ku yiil xaafadii shiirkole ofishaale, markii aan maqlay madficii ugu horeeyey ee ka dhaca magaalada Muqdisho. Saacadu waxay ahayd 14:15 duhurnimo waxaana idaacadii radio muqdisho ku jirey warkii dunida. Nasiib daro waxay dhacdadasi ku beegnayd maalin ama labo maalmood ka hor intii aanu dhalan sanadkii cusbaa 1991. Colaadii maalintaa kowsatay heerkey gaadhay iyo maanta messha ay mareyso uma baahna in la bayaaniyo. Idina tii oo kale ayaad laabta u garaacaneysaan labo maalmood ka hor dhalshada sanadka cusub ee 2004.
Haddaba waxaa nasiibdaro ah in sadex iyo toban sano kadib dhacdada aan kor ku xusay, rag dan shaqsi ah wata ay maanta u dig iyo dam leeyihiin in ay dagaal ka abuuraan deegana dhifka ah ee ka nabada galay dagaaladdii ahliga ahaa ee ku habsaday dhulkii hooyo. Haddii aan awood u lahan lahaa maanta saacada dib ayaan u celin lahaa, si looga hortago in ruux Soomaali ah dhiigiisu daato.
Waxaan ku odhan lahaa labada maamul ee isku herdiyaya magaalada Laascaanood, in aaney ilaawin in danta dadwenuhu ay ka muhiimsantahay tooda gaarka ah ee saklaka ku heysa hadaf siyaasadeed oo ku saleysan dhulbalaadhsi iyo qabill muruq kudhis. Waxaan ka codsanayaa dhamaan intiina ku hawlan collad-oogida ka aloolsan gobolka Sool iyo nawaaxigiisa, bal in aad dib u qoodhansataan sadex iyo toban sano kahor sidey aheyd magaalada Laascaanood iyo maanta sidda ay tahay.
Isimada deeganka ayaa leh masuuliyada ugu sareysaa wixii khasaara iyo dhimasho ah ee ka yimaada dagaalkan la hurinayo. Idinkaa labada maamul ee isku kiin haystaba wax kasoo dhisay idinkoon isla tashan cidkalena kala tashan. Dhawaaqan deegan_ dumiska iyo barakicinta ah ee ka socda magaalada waa midhihii ka soo go’ay geedihii aad ubuurteen. Idinkayna idiin taalaa siddii aad uga hortegi lahaydeen xiisadan taagan.
Shacabkoow taariikhdu waa shey taxana ah, loona baahan yahay in wax laga barto. Ee ha noqonina kuwo aan waxba ku qaadan wixii saameeyey deegaanada idin ku xeeran. Waa in aad si cad uga hortagtaan wax alaale iyo wixii keenaya dhibaato ku timaada, naftaada, tan jiiraankaaga, awlaadaada, waalidkaaga iyo beyada aad ku dhaqanatahy oo ah meesha hoyga u ah adiga iyo in badan muslimiin ah. Maanta magaaladu uma baahna caruur kale oo agoon ah amse rajo ah. Ka hortaga wax kastoo dhib idiin keenaya oo iska qabta COL_OOGAYAASHA. CAQLIGUNA HA SHAQEEYO.
Waxan idiin rajeynaa nabad qab.
»Maxaynu u Wax Qabad u Samayn waynay
»Dhaqanka Wanaagsan ee Islaamku ina Faraayo
»Masayrka Maangaabyada [Shaafici]
»BBC-da: SIYAASADAHA DAHSOON EE GUMAYSTAHA [Salahudin]
»BBC WAA IDAACAD HUFAN LAAKIIN MAXAY INOO TAHAY?
»"BBC-DA WAA ASATAANTA HORUMARKA UMADA SOMALIYEED"
»Cudurka Aidska iyo BBC-du maxay wadaagaan? [Cali]
»C/hi Riyaale ma iska Difaaci Karaa? [C/Waxid]
»Jawaab: Gabaygii wuu Dhintay [C/Risaq Xuseen]
»Abgaaloow awrkiina qabsada (Maxamed Dheere) [C/Waxid]
»CILMI IYO CAADO.... [Caasha]
»Intaydaan Dowlad Dhisin, Caqligiinna aan Dhisno [C/Waxid]
»Badwaynta Kalgacalka [SIRTA GUUSHA...]
»Sidee Saddam Hussein loo qabtey? [A.Zahid]
»SADDAAM XUSEEN: DIKTAATOORKII NASIIBKA XUMAA [Fahad]
»MA KU GUULAYSTAY MARAYKANAK CIRAAQ ? [C/Raxman]
»Shirka Kenya Waxaa Lagu Bahdiley Soomaaliya [Abdullahi]
»Reer Caabudwaaqwow Colka joojiya [Dhegacade]
»Musaveni iyo Musyoka oo maamuusay mooryaanta [C/waxid]
»Daan-Daansiga Maamulka Hargaysa Ma ka Siidarayaa? [Qamaan]
»MA NACAYBKA SOOMAALILAND AYAA SOOMAALIWEYN KEENI DOONA?
»YAA LA GUURSADAA? [Catoosh]
»SOOMAALIYEEY UU DUCEEYA DALKIINA [pilot]
»JIDKII LAGU GAARI LAHAA XAL WAARA: WAA KAA [Awes]
»SOMALILAND WAA BUUR BUURTANA DABAYSHU MA RUXDO [Liban]
»MAQAALADA KALE EE TODDOBAADKAN... GUJI